नम्रताको एक्सन हेरेर को-को फ्यान भए ? (फोटो फिचर) « Ramailo छ
नम्रताको एक्सन हेरेर को-को फ्यान भए ? (फोटो फिचर)
प्रकाशित मिति : Aug 23, 2019
समय : 5:30 pm
नायिका नम्रता श्रेष्ठको शिर्ष भूमिका रहेको फिल्म ‘जाइरा’ शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको छ । आशुतोष श्रेष्ठको निर्देशन रहेको फिल्ममा नम्रतासँगै प्रमोद अग्रहरी, अनुपविक्रम शाही, सृजना रेग्मी लागयतको अभिनय रहेको छ ।
‘जाइरा’को प्रदर्शनको पहिलो दिन विशेष शोको आयोजना गरिएको थियो । जहाँ, फिल्म युनिट सहित अन्य फिल्मकर्मी उपस्थित थिए । निर्देशक दिपाश्री निरौला, गायक रामकृष्ण ढकाल, नायक संयम पुरी, नायिका तथा भिजे आश्मा डिसी र गायक सन्तोष लामाले फिल्ममा नम्रताले एक्सन दृश्य गज्जबको दिएको प्रतिक्रिया दिए । हेर्नुस्, कुशल घतानी राईले खिचेको ‘जाइरा’ शोमा पुगेका फिल्मकर्मीको केही तस्बिरहरु :